Ururka ay kumideysan yihiin shaqalaaha jaamacadaha oo ku goodiyay shaqo joojin qaran – The Voice of Northeastern Kenya
Ururka ay kumideysan yihiin shaqalaaha jaamacadaha oo ku goodiyay shaqo joojin qaran
Star FM December 24, 2016
Ururka ay ku mideysan yihiin jaamacadaha dalka ayaa ku doogiyay in ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin laga bilaabo 3-da bisha January ee sanadka soo socdo hadii loo kordhin waayo lacagaha mushaaradka.
Shaqaalaha jaamacadaha ee UASU Iyo ururka ay kumideysan yihii dhamaan jaamcadaha dalka ee KUSU ayaa ka dalbanayaa dowlada in ay soo faristaan miiska wadahadalka si looga wada heshiis la doonayay in gunooyin la siiyo shaqaalaha jaamacadaha kaaso la filayay in la dhaqan galiyo sanadkii 2013-kii iyo sanadka soo socda ee 2017-ka.
Xoghayaha Ururka KUSU Charles Mukhwaya iyo dhigiisa Shaqaalaha jaamacadaha ayaa dowlada u qabtay ilaa horaanta bisha soo socota in ay wax oga qabato arimahan si looga hortago shaqo joojinta.
Waxyaabaha ay doonayeen ayaa ah in macalinka u shaqeeya jaamacada uu qaato lacag dhan 350,000 oo shilinka dalka halka ninka haysto magaca Proffer ee ka howlgala Jaamacada uu qaato lacag dhan 1.9 milyan oo shilin bishiiba.
← Madaxweyne Uhuru oo cadaadis lagu saarayo in uusan ansixinin hindisihi ay baas mariyeen xildhibaanada Jubilee
Golaha amaanka ee qaramada midoobay oo dalbanaya in la joojiyo guryo sharci daro ah oo laga dhiso dhulka falastiin →
Madaxweynaha Mozambique oo sheegay in dhimashada ka dhalato duufaanta xooggan ay kor u dhaafi karto 1000 qof March 19, 2019
Madaxweynaha Maraykanka oo soo magacaabi doono Safiirka ku matalaya Mexico March 19, 2019
Barasaabka Mombasa oo beeniyay inuu ka dambeeyo qorsho lagu kala dirayo dowlad deegaankaasi March 19, 2019
Agaasimaha dacwad oogidda oo lagu wareejiyay baaritaanada biyo xireenada Rift Valley March 19, 2019
Hanti dhowraha guud oo sheegay in lacago badan lagu lunsaday ismaamulada March 19, 2019
Gagida diyaradaha ee Kisumu oo xiran March 19, 2019
13,000 oo argagixiso ah oo lagu xiray Shiinaha 5-tii sano ee la soo dhaafay March 18, 2019
Aqalka sare ee dalka oo u yeeray barasaabka Mombasa March 18, 2019
Senetarka Isiolo oo cabasho ka muujisay in dhalinyaro badan aynan helin aqoonsiga qaran March 18, 2019
Barasaabka Turkana oo sheegay in la buunbuuniyay baahida ismaamulkaasi ka jirta March 18, 2019
Madaxweynaha Mozambique oo sheegay in dhimashada ka dhalato duufaanta xooggan ay kor u dhaafi karto 1000 qof
Madaxweynaha Maraykanka oo soo magacaabi doono Safiirka ku matalaya Mexico
Barasaabka Mombasa oo beeniyay inuu ka dambeeyo qorsho lagu kala dirayo dowlad deegaankaasi
Agaasimaha dacwad oogidda oo lagu wareejiyay baaritaanada biyo xireenada Rift Valley
Hanti dhowraha guud oo sheegay in lacago badan lagu lunsaday ismaamulada
Gagida diyaradaha ee Kisumu oo xiran
13,000 oo argagixiso ah oo lagu xiray Shiinaha 5-tii sano ee la soo dhaafay
Senetarka Isiolo oo cabasho ka muujisay in dhalinyaro badan aynan helin aqoonsiga qaran